These terms and conditions ("Terms", "Agreement") are an agreement between Two Four DMA Media Group Co., Ltd. ("Two Four DMA Media Group Co., Ltd.", "us", "we" or "our") and you ("User", "you" or "your"). This Agreement sets forth the general terms and conditions of your use of the https://www.24jobs.com.mm website and any of its products or services (collectively, "Website" or "Services").
During use of the Website, you may enter into correspondence with or participate in promotions of advertisers or sponsors showing their goods or services through the Website. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, are solely between you and the applicable third-party. We shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase or promotion between you and any such third-party.
To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will Two Four DMA Media Group Co., Ltd., its affiliates, officers, directors, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for (a): any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use or content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if Two Four DMA Media Group Co., Ltd. has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of Two Four DMA Media Group Co., Ltd. and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors, relating to the services will be limited to an amount greater of one dollar or any amounts actually paid in cash by you to Two Four DMA Media Group Co., Ltd. for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.
The formation, interpretation and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Myanmar without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Myanmar. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the state and federal courts located in Yangon, Myanmar, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right toajury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.
ဤစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များသည် Two – Four DMA Media Group Co.,Ltd နှင့် http://www.24Jobs.com.mm ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၎င်း၏ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသူတို့အကြား ပြုလုပ်သော သဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ Two-Four DMA Media Group Co.,Ltd ကို “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏/အား” ဟူသော စကားရပ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုသူကို “သင်”၊ “သင်တို့”၊ “သင်တို့၏/အား”ဟူသောစကားရပ်များဖြင့်လည်းကောင်း ကိုယ် စားပြုသုံးစွဲမည်။
အကောင့်များ (Accounts) နှင့် အသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်း
ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသူသည် အနည်းဆုံးအသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း၊ ဤသဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာရန် သဘောတူခြင်းအား ဖြင့်သင်သည် အနည်းဆုံး အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် အကောင့်ဖွင့်ပြီဆိုလျှင် သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရန်၊ သင့်အကောင့်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံး တို့ကိုတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့သော လွဲမှားသည့် အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အ လက်များဖော်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကိုမဆိုပြုလုပ်ပါက သင့်အကောင့်သည် ရပ်စဲခြင်းခံရမည်။ သင့် အကောင့်အားခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများရှိလာပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားအသိပေးရမည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် သင့်ဘက်မှ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်း၊ ထို့သို့ပျက်ကွက်၊ မေ့လျော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ဤစာ ချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကို ဖောက်ဖျက်သည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် သင်ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သတင်းကောင်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်လျှင် သင့်အကောင့်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အသုံးပြု၍မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်း အရင်းများကြောင့်သင့်အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့က(၀က်ဘ်ဆိုက်မှ) ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုလျှင်သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို ရယူရန်ပြန်လည် မှတ်ပုံတင် အသင်းဝင်ခြင်းပြုလုပ်၍ ရမည်မ ဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့် အင်တာနက်ဆိုင်ရာ လိပ်စာများကို ပိတ်ဆို့ ဟန့်တားပြီး မှတ်ပုံတင်အသစ်မပြုလုပ်နိုင်အောင် တားဆီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူ (User) ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများ (Content)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀က်ဘက်ဆိုက်တွင် သင်ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာ (Content) များ ဖြစ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို မပိုင်ဆိုင်ပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ဖော်ပြသောအကြောင်း အရာများအားလုံး၏ တိကျမှု၊ အရည်အသွေး၊ သမာဓိသိက္ခာ၊ တရားဝင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဆီ လျှော်အပ်စပ်မှု၊ အနုညာတ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သာလျှင် တစ် ဦးတည်းတာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် တင်ထားသော သို့မဟုတ် ဖန်တီးဖော်ပြထား သောအကြောင်းအရာများကို သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် စောင့်ကြည့်အကဲခတ် နိုင်ပါသည်။ သင်မှ တိတိကျကျခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိလျှင် သင်၏ အကောင့်တွင် သင်ဖော်ပြထား သောစီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအလားတူကိစ္စရပ်များ အတွက် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခွင့်၊ ထပ်ဆင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံ ခွင့်၊ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခွင့်များ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သင်ခွင့်ပြုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသော အကြောင်းအရာများကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကော်ပီကူး ခြင်း၊ ထုတ်ယူဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြသခြင်းတို့ကို သင့်အားလုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်သော ၀န်ဆောင်မှုများအပေါ် မူတည်၍လုပ် ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်ခွင့် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအာမခံချက်များ တစ်စုံတစ်ရာသတ်မှတ်ကန့်သန့်ခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်အရ မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်သည် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု ယူဆလျှင် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် အကြောင်းအရာအရန်စနစ်များကို ပုံမှန်ထားရှိလုပ်ဆောင် ပါသည်။ ဤအရန်စနစ်များ ပြည့်စုံတိကျမှုရှိရေးကို အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူ တာ(အမာထည်) စက်ကိရိယာများ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှု (သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရန်စနစ်များကို အလိုအလျောက်ပြန်လည်ဆွဲ ယူအသုံးပြုပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကွန်ပျူတာချွတ်ယွင်းနေသော အချိန်များကို အနည်းပါးဆုံးဖြစ် အောင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်သည် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိကောင်းရှိနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ဤသဘောတူစာချုပ်တွင် တိတိကျကျဖော်ပြမထားခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြား ၀က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အခြားဝက်ဘ်ဆိုက် များ နှင့် သဘောတူညီထားခြင်း၊ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အထောက်အပံ့ရယူထားခြင်း၊ ထောက်ခံ ပေးထားခြင်းများရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးချင်း၏ ကိစ္စများ သို့မဟုတ် ၀က်ဆိုက်ရှိကြောင်း အရာများအား စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့သို့လုပ်ဆောင်ပေးရန် ကမ်လှမ်းမှုများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံမည်ဟုတ်ပါ။ အခြားကြားခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆာင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိဟုယူဆပါသည်။ သင်သည် ဤ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရှိချိတ်ဆက်မှု (Link) တစ်ခုမှ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်သော မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မဆိုအသုံးပြုပါက ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် တရားဥပဒေဆိုင် ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သေချာစွာ လေ့လာကြည့်ရှုသင့်သည်။ အခြားပြင်ပ၀က်ဘ်ဆိုက် (off-site websites) များနှင့် သင်၏ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် သင်၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၀က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနေချိန်အတွင်း သင်သည် အခြားသူများနှင့် စာရေးဆက်သွယ်ခြင်း များ သို့မဟုတ် ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများပြသ သည့်ကြော်ငြာသမားများ သို့မဟုတ် စပွန်ဆာများ၏ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခြင်းပြုကြ မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောသဘောတူညီ ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အာမခံချက်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမှုများသည် သင်နှင့် ကြားခံ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြားဆက်ဆံမှုများသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသင်နှင့်ကြားခံလူ ပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများအကြား စာရေးဆက်သွယ်မှုများ၊ ၀ယ်ယူမှုများ (သို့မဟုတ်) အရောင်း မြှင့်တင်မှုများ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့်တာဝန်မျှမရှိပါ။
ဤသဘောတူစာချုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော သဘောတူညီချက်များအပြင်ဝက်ဘဆိုက် သို့မဟုတ် ၀က်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာများကို အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြုခြင်းမပြု ရန်သင့်အားတားမြစ်သည်။
(က) ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်ကိစ္စများ
(ခ) ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အပြုအမူများလုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ရန် အခြားသူများကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးခြင်း
(ဂ) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများ၊ နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေများ၊ ဒေသဆိုင်ရာကျင့် ၀တ်ထုံးစံများကို ချိုးဖောက်ခြင်း
(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ အနုညာတ ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏ အနုညာတပစ္စည်းမူပိုင် ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်း
(င) ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ အသက်အရွယ်၊ မူလနိုင်ငံ၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကျား/မ ကွဲပြားမှုတို့အ ပေါ်အခြေခံ၍ စော်ကားခြင်း၊ နှောင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ သေးသိမ် ညှိုးနွမ်းစေခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မတရားသဖြင့်ချိုးနှိမ်ပြော ဆိုခြင်းများ
(စ) မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် အထင်မြင်မှားစေသော သတင်းအချက်အလက်များ ၀က်ဘ် ဆိုက်ပေါ်တင်ခြင်း
(ဆ) ၀က်ဘ်ဆိုက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသော ၀က်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် အင်တာနက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် ဗိုင်းရပ်စ်များ ထုတ်လွှတ်ကျရောက်စေခြင်း သို့မဟုတ် မလိုမုန်းထားသော ဂဏန်းသင်္ကေတပုံစံများ အသုံးပြုခြင်း
(ဇ) အခြားသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူ သို့မဟုတ် ခြေရာခံခြင်း။
(ဈ) ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် လူ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့် မညီသော ကိစ္စများလုပ်ဆောင်ခြင်း
(ည) ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသော ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက် များသို့မဟုတ် အင်တာနက်တို့၏ လုံခြုံရေးစနစ်များကို နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှောင်တိမ်းခြင်း။
တားမြစ်ထားသော အသုံးပြုမှုကို ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် သင်၏ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အခြားဆက်စပ်နေသော ၀က်ဘ်ဆိုက်များ အသုံးပြုမှုကိုိ ရပ်စဲပိုင်ခွင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ဤသဘောတူ စာချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများ နှင့်ဤသဘောတူစာချုပ်မှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့် အငြင်းပွားမှုမျိုးမဆို မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းသာ ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများ နှင့် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ သို့မဟုတ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဥပဒေရွေးချယ် ဖြေရှင်းမှုများကို ပဓာနပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အခင်းဖြစ်အကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ဆောင် သောအရေးယူမှုများအတွက် သီးခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်နေရာတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသော ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတို့သာဖြစ်ရမည်။ ဤအ ကြောင်းကြောင့်သင်သည် ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်လာသော တရားစွဲဆိုမှု များအတွက် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ရမည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ၀က်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် စာချုပ်၏မူဝါဒများကိုလည်းကောင်း မည်သည့် အချိန်တွင် မဆိုပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်သည် နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသည့် ဤသဘောတူစာချုပ်ကို ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင်တင်လိုက်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့လက်ဝယ်ရှိသည်။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှု ပြုသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က အသိပေးချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ အဓိက စာမျက်နှာ (main page) ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အပြောင်းအလဲနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ဆင်မှုကို သင့် အနေဖြင့် သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူသည်။
သင်သည် ဤသဘောတူ စာချုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီး စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်နှင့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤ ၀က်ဘ်ဆိုက် (သို့မဟုတ်) ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ဤသဘောတူ စာချုပ်ကို လိုက်နာရန်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက် များကိုလိုက်နာရန် သဘောမတူပါက သင်သည် ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀င်ရောက်ရယူအသုံးပြုခွင့်မရှိပေ။
ဤသဘောတူ စာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက် သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤသဘောတူညီချက်စာချုပ်စာတမ်းကို ၂၀၁၈၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲသည်။